दम्पतीबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्ने तरिका (भिडियोसहित)
सृजना राई २४ माघ २०७७
एउटा भनाइ नै छ, ‘बुढाबुढीको झगडा परालको आगो’ । तर, यसरी हुने दम्पतीबीचको झगडा उनीहरूमा मात्र सीमित हुँदैन, यसले बालबच्चा र समग्र परिवारमा पनि असर गर्ने गर्छ । झगडा गरिरहने आमाबुवाका सन्तान क्रोधित मात्र हँुदैनन्, हीनताबोधले समेत ग्रस्त हुन्छन् । सम्बन्ध एकपटक जोडेर मात्रै हुँदैन । यसलाई जारी राख्न र नियमित गराउनु पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । कुनै पनि सम्बन्धलाई बलियो र राम्रो बनाउनका लागि सम्बन्धमा लापरवाही र एकअर्कालाई ध्यान नदिनुले अक्सर सम्बन्धमा कमजोरी ल्याउँछ । श्रीमान्–श्रीमतीबीच झगडा हुने कारण एउटा मात्र कारण हुँदैन । अनेक कारणले दम्पतीबीच खटपट आइरहन्छ । तर, दम्पतीबीच हुने झगडा कुन प्रकारको हो, छुट्याउन सकिन्छ । (भिडियो)
प्रायःजसो मान्छेमा अरुको आलोचना गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । हामी संसारको सबैभन्दा सुन्दर चिजमा पनि खोट देखाउन सक्छौं । फूल प्रकृतिको एक उत्कृष्ट रचना हो, तर फूलमा पनि हामी दोष लगाउन सक्छौं । हाम्रो प्रवृत्ति यस किसिमको छ । यसरी खोट देखाउने, कमजोरी औंल्याउने, दोष लगाउने प्रवृत्तिलाई जब हामी दाम्पत्य सम्बन्धमा ल्याउँछौं, त्यसले निकै अप्रिय घटना निम्त्याउँछ । कतिपय दम्पती हुन्छन्, जो एकअर्कासँग दोषारोपण गर्दै बस्छन् । उनीहरु आपसी समझदारीमा भन्दा पनि एकअर्काको दोष पहिल्याउनमै तल्लिन हुन्छन् । श्रीमान् वा श्रीमतीको आलोचना गर्ने यस प्रवृत्तिले तपाईंहरुको सम्बन्धमा नकारात्मकतालाई ठाउँ दिन्छ । यसले दाम्पत्य सम्बन्ध सधैं खल्लो बनाइराख्छ ।
आलोचनात्मक रवैया एक हदसम्म सही हुन्छ । तर, यसलाई व्यवहारको हिस्सा बन्न दिनु हुँदैन । हरेक कुरामा, हरेक पटक आलोचना मात्र गरिरहँदा त्यसले सम्बन्धलाई धरापमा पार्छ । आलोचना गर्दा सकारात्मक कुरामा पनि गरौं ।
श्रीमान–श्रीमतीबीच भनाभन हुन्छ, यस्तो अवस्थामा एकअर्कालाई तिरस्कार गरियो भने बुझ्नुपर्छ कि दम्पतीको आपसी सम्बन्धमा सम्मानको भावना पटक्कै छैन । आपसी सम्मान नै त्यो चिज हो जसले सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ । पार्टनरको कुरालाई हल्ला रुपमा लिने, सुन्नै नचाहने जस्ता लक्षणहरु हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टनरले गरेको कामप्रति निन्दा, गुनासो साथै उपेक्षा गर्छन् ।
एकअर्काबीच सम्मानजनक व्यवहार हुँदैन । यो निकै खतरनाक हो । यदि तपाईंहरु पनि एकअर्कालाई तिरस्कार गर्नु हुन्छ भने यसबाट हुने संभावित क्षतिबारे विचार गर्नुहोस् । भोलिका दिनमा तपाईंहरुको दाम्पत्य जीवन कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ? तपाईंहरुबाट छोराछोरीले कस्तो अभिभावकत्व पाउँछ ? आफन्त एवं इष्टमित्रका सामुन्ने तपाईंहरु कति निरिह हुनु पर्छ ? ख्याल गर्नुहोस् । त्यसैले एकअर्कालाई उपेक्षा गर्ने, तिरस्कार गर्ने होइन सम्मान गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस् । अर्काको भावनालाई आदर गर्नुहोस् ।
आपसी संवादको कमी
झगडाका क्रममा कतिपय दम्पती बोलचाल बन्द गर्छन् । उनीहरुको बोलचाल त्यसबेलासम्म बन्द हुन्छ, जब बोल्नै पर्ने अवस्था आइलाग्दैन । संवादका लागि दुबैजना अग्रसर हुँदैनन् । आफू बोल्न अग्रसर हुँदा आफ्नो हार हुने सम्झन्छन् । यही दम्भले दाम्पत्य जीवनको सुख लुट्ने गर्छ । दम्पतीबीच झगडा हुनु स्वाभाविक हो । यसरी झगडा भएपछि केही क्षण बोलचाल नहुनु सामान्य हो तर, लामो समय बोल्दै नबोल्नु उचित होइन् । यसले गर्दा लामो समयसम्म दम्पतीहरु तनावग्रस्त हुन्छन् । मनमा अनेक कुरा खेल्न थाल्छ र सम्बन्धमा फाटो आउँछ ।
हरेक कुरामा आफू माथि हुन खोज्नु, सधैं आफ्नो जित्न खोज्नु सम्बन्धमा राम्रो हुदैन । त्यस्तै सधैं आफ्नो वचाउ मात्र गरिरहनु पनि राम्रो हुँदैन । कहिल्यै पनि जबरजस्ती आफूलाई सही बनाउने प्रयास गर्नु हुन्न । गलत कुरा वा आफ्नो कमी कमजोरी स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो गल्ती सच्याएर अगाडि बढ्दा सम्बन्ध थप परिपक्क हुँदै जान्छ । जबकी आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै नगर्ने वा आफ्नो वचाव मात्र गरिरहने प्रवृत्तिले दाम्पत्य जीवनमा फाटो ल्याउँछ ।
एक अर्कालाई माफ
दम्पतीबीचको झगडामा एकअर्कालाई विभिन्न शब्दहरु प्रयोग गरिन्छ । यसरी रिसमा बोलिएको शब्दहरुले आफ्नो पार्टनर निराश भएको कुरामा माफ माग्ने अथवा माफ गरिदिने बानी गर्नु पर्छ । आफ्नो पार्टनरको कुन व्यवहार मन पर्दैन यसलाई नरमशैलीले भन्न सकिन्छ । आफ्नो उदासीनताको कारण पत्ता लगाउन सकियो भने यसलाई आफ्नो पार्टनरसँगै नरम व्यवहार गरेर समाधान गर्न सकिन्छ । एक अर्कासँग खुलारूपले कुरा गर्नुहोस् । कुरा गर्ने बेलामा समाधान नगरिएका कुराहरु छोड्नु राम्रो हुँदैन । सम्भव भएसम्म सम्बन्धमा दुरी बढ्न नदिनुहोस् ।
यदि तपाईं जहिले पनि सही छु भनेर सोच्नु हुन्छ र आफ्नो पार्टनरले माफी माग्नुपर्छ भन्नेमा तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ भने यस्तो सोच्नु ठीक कुरा होइन । यदि तपाईंको पार्टनरले पनि यस्तै सोच्छ भने स्थिति अझ खराब हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा कसैले पनि एकअर्कासँग माफी माग्दैन र दुबै अटल हुन्छन् । यसले झनै समस्या सिर्जना गराउन सक्छ । त्यसो भए आफ्नो जिद्दी छोड्नुहोस् र पहिले आफैँ आफ्नो पार्टनरलाई बोलाउने कोसिस गर्नुहोस् । दुवैले बोलाउने कोसिस गर्ने हो भने यसले बिग्रिँदो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि गल्त तपाईंको तर्फबाट गरिएको छ भने ढिलाइ नगरी यसलाई स्वीकार्नुहोस् । विश्वास गर्नुहोस्, तपाईंको पार्टनरले तपाईंको व्यवहारको लागि माफी दिन कन्जुस्याइँ गर्दैन । चाहे श्रीमान् होस् या श्रीमती माफी दिन कसैले पनि हिच्किचाउने गर्दैनन् । माफी माग्दा विशेष गरेर सम्बन्ध मजबुत गराउन पनि यसले मद्दत गर्छ । तपाईंको व्यवहारले तपाईंहरू दुवैको सम्बन्ध बचाउन पुलको रूपमा काम गर्छ । जतिसुकै ठूलो लडाइँ भए पनि यस्तो पहलले लडाइँलाई चाँडै अन्त्य गर्न मद्दत गर्छ ।
जब तपाईंको पार्टनर तपाईंसँग रिसाउँछ उनीहरू जो सुकै भए पनि त्यो समयमा उसले तपाईंलाई भावनात्मक समर्थनको अपेक्षा गर्छ । यस्तो अवस्थामा यदि तपाईं आफूलाई भावनात्मकरूपमा कमजोर भएको देखाउनुहुन्छ वा उसले खोजेको भावनात्मक समर्थनलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ भने तपाईंले उसबाट सधैंका लागि आदर गुमाउन सक्छ । धेरै सम्बन्धहरूमा ब्रेकअपको सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको नै भित्रबाट महिलाको टुक्रिएको मन र आफ्नो पार्टनरप्रतिको आदर गुमाउनु हो । त्यसैले एक अर्काको भावनात्मक सहयोग पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
साझेदारहरूबीच मौन लडाइँले झगडाले भन्दा बढी हानी गर्छ । यो मौन लडाइँले अभेद्य चट्टानको रूपमा कार्य गर्छ । जुन तोड्न धेरै गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा बुद्धिमानी साथ काम गर्दै घरका ज्येष्ठ व्यक्तिहरूलाई यसको बीचमा ल्याउनुहोस्, एक अर्कासित राम्रोसँग कुरा गर्नुहोस् । अन्यथा तपाईंले धेरै ठूला निर्णयहरू लिनुपर्दछ । त्यसकारण कुनै पनि अवस्थामा, दुवैले मौन हुनुहुँदैन । त्यसैले भावनात्मक उपचारबाट दम्पतीबीच फाटेको सम्बन्धलाई जोड्न सकिन्छ ।
जीवनसाथीसँग सधैं खुसी रहन कोशिस गर्ने
विवाहपछि सधैं वर्तमान र भविष्यको बारेमा कुरा गर्नुहोस्, यो उत्तम हुनेछ । विगतका पानालाई पल्टाउने कोसिस गर्ने हो भने तपाईंको पार्टनरलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ । त्यसकारण सन्तुष्ट हुनुहोस् जति तपाईंलाई आफ्नो पार्टनरको विगतको बारेमा थाहा छ, बाँकी कुरामा ध्यान नदिनुहोस् । प्रायः केही मायालु दम्पतीहरूले एक अर्काको आलोचना गर्ने बानी हुन्छ । कहिलेकाहीँ आलोचना गर्ने छुट्टै कुरा । तर त्यसैलाई लिएर बारबार किचकिच गर्ने नगर्नुहोस् । आफ्नो पार्टनरलाई अरूभन्दा आफू विशेष भएको महसुस गराउनुहोस् । पार्टनरको समस्या बुझ्नुहोस् र तिनीहरूलाई समर्थन गर्नुहोस् । उनीहरूसँग खुसीको क्षण बिताउनुहोस् र त्यस्तै अनुभवहरू साझेदारी गर्नुहोस् । कहिलेकाँही आफ्नो पार्टनरको प्रशंसा पनि गर्नुहोस् । यस तरीकाले आफ्नो सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न सकिन्छ ।
प्रकाशित: २४ माघ २०७७ १८:४५ शनिबार
कम्प्युटरमा स्क्रिनसट कसरी लिने ? जान्नुहोस सबैभन्दा सजिलो तरिका